Shenzhen BoRun Electronics Co., LTD waa saaraha ah xarun USB C, USB Cable C, wireless xeedho tan iyo 2013, awoodda RD xoog leh, taasoo keentay khayraadka sahaydu, in-guryaha xarunta warshad noo saamaxaysa in ay bixiyaan lamaanahaaga OEM & adeega OBM & ODM in qadarin MOQ oo tartan qiimo.
Inkasta oo aad u baahan tahay in ay qayb weyn ka iibiso aad wax soo saarka ee marketing halkan waxaan leenahay warshad gaar ah in ay soo saaraan waxyaabaha aad, si ay u maareeyaan oo tayo leh, inta aad u baahan tahay inaad kartoo waxyaabaha qaar ka mid ah aannu injineerada soo maray aad for. annana waannu ku maqli aad fikrado iyo wadaagaan noo soo jeedin in ay wada shaqeeyaan. Thanks to awoodaha injineernimada, wax soo saarka, baaritaanka aynu taageero noo noqon bixiyaha xal one-stop leh sumcad sare ee suuq-ka.
Waa Lucia oo ka University Shenzhen qalin la Degree Bachelor ee Suuq, tan iyo 2014 Markii aan ku biiray Macverin iyo riyaaqay ka wada shaqaynta iyo nolosha dadka kula shaqeeya iyo inta badan masuulka ka ah dhismaha brand iyo horumarinta. Haddii aad u baahan tahay falanqayn wax marketing ama macluumaad fadlan la hadal ila.
Waa Eunice kuwaas oo oo ka tirsan jaamacadda Shenzhen ka qalin la heerka Bachelor ee ganacsiga Ingiriisi, waan jeclahay Ingiriisi iyo baran dhaqamada kala duwan ereyga oo dhan, tan iyo 2013 waxaan ku biiray Macverin aan lahaa xirfado shaqo iyo ogaadaan sida ugu wanaagsan ee ay u bixiyaan dar-qiyamka macaamiisha, waxaan noqon doonaa halkan kooxdeyda in ay bixiyaan 24 * 7 adeegga Instant.
Waa Paul kuwaas oo uu ka qaatay Jaamacad Hunan Engineering Technology ee korantada qalin, waqtiga oo dhan in ay bartaan waxyaabaha Apple iyo isbeddellada sababtoo ah waxaan ahay taageere weyn ayaan ku qaatay, fikrado marka aan shaqada layga in Macverin Waxaan mar walba ku yayna alaabta cusub, waxa ay qaadataa sahlanaato more dadka isticmaala dhamaadka sababtoo ah waan ogahay hawadiinna.
Waa Gavin oo ka shaqeeya sida naqshadeeye ee Macverin, waan jeclahay barbaro, music iyo design, dunida waa sidaas cajiib ah oo qalbigayga, waxaan raacaa wax kasta tast daqiiqado dhan, qurxin la gacmaha iyo maskaxda, in Macverin waxaanu kuu soo bandhigi xirmo oo lacag la'aan ah iyo suuq- qalabka design la qadarin MOQ, waxaan ahay gacmaha 3aad sidii gurmad.
OUR SERVICE QIIMAHA ADD-
Waxaan leenahay u gaar ah .Tani model caag qaadashada iyo qaybo ka mid duro warshad noo soo dedejin waqtiga dhalmada ODM-hawlgalayaasha our.
Rich waaxda RD khibrad iyo tababare saarka marketing noo saamaxaysa in ay bixiyaan jeedinta gaar ah design tiga-hawlgalayaasha our.
awoodda wax soo saarka asalka ah ee guryaha awood na bixiyaan jeedinta tayo sare leh, waayo, wada-hawlgalayaasha.
100% kormeerka tayada hor dhalmada iyo heerka haleysan yahay in ka yar 0.3%.
24 by 7 waqtiga dhabta ah pre-ka dib markii adeeg iibka hubiso in aad hesho jawaab-celin degdeg ah.